ချစ်ရအောင်: Peekaboo Comments လေးများ လုပ်ကြမယ်...
Posted by Unknown Blogger Comment
ဒီတစ်ခါလက်ဆင့်ကမ်းပြောပြချင်တာကတော့ Peekaboo Comments လေးတွေ အကြောင်းပါ. ဒီအကြောင်းကို ရေးမယ်လို့ အားခဲထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ. အခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်ဗျာ.
Peekaboo Comments ဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိချင်နေသူများ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေထဲက ကော်မန့်ရှိတဲ့ပို့စ်တစ်ခုခုကို သွားကြည့်ပြီး ကော်မန့်ကို Click ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါ. (Friendly Neighbors လို့ ကျွန်တော်က နာမည်တစ်မျိုးပေးထားတယ်ဗျ).
ပုံမှန်အရဆိုရင် Comments ဆိုတာကို Click ခေါက်လိုက်ရင် နောက်ထပ် စာမျက်နှာ အသစ်တစ်ခု ပွင့်လာပါတယ်. အဲဒီ့မှာပဲ ကျွန်တော်တို့က Comments ရေးတာတို့၊ ဖတ်တာတို့ကို လုပ်ရပါတယ်.
Peekaboo Comments ကျတော့ သူ့ကို click ခေါက်လိုက်တာနဲ့ ရေးထားတဲ့ comments လေးတွေကို same page မှာပဲ ဖတ်လို့ရနိုင်သလို ရေးလို့လည်း ရပါတယ်. အချိန်ကုန်သက်သာသလို ကော်နက်ရှင်လည်း မြန်ဆန်သွက်လက်လာစေပါတယ်.
ကဲ. ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်ပါခင်ဗျာ.
အဆင့် (၈) ဆင့်နဲ့ ခွဲပြီး ပြောပြသွားပါမယ်. တစ်ဆင့်ချင်းကို သေချာဖတ်ပြီး လုပ်ရင် ၁၅ မိနစ်နဲ့ ဒီကိစ္စ အောင်မြင်ပြီးစီးပါလိမ့်မယ်. စိတ်လောပြီး ဟိုကျော်ဒီကျော်ဖတ်ရင်တော့ Error ကြီးနဲ့ တိုးသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း….
(၁) မိမိဘလော့ဂ်ထဲကနေ Settings> Edit HTML ကိုသွားပါမယ်. Template ကို Backup လုပ်ရပါမယ်. ဒါမှ မတော်လို့ မှားသွားရင် အရင် Template ကို restore ပြန်လုပ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီတိုင်း Backup လုပ်ချင်ရင်လုပ်. မဟုတ်ရင်တော့ Template တစ်ခုလုံးကို ကူးပြီး Ms Word ထဲမှာ Save လုပ်ထားလိုက်ပါ. အဓိကက Template ကို မပြင်ခင် ကိုယ့်မှာ Hard Copy ရှိနေဖို့ပါပဲ.
(၂) Expand Widgets Box သေးသေးလေးကို Tick လုပ်ပေးခဲ့ရပါမယ်. ဒါဟာလည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ်. Template ပြင်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ Code လေးတွေ ရှာမတွေ့ဘူးလို့ ခဏခဏ ပြောတတ်ကြပါတယ်. အဲဒါဟာ Expand Widgets ဆိုတဲ့ Box လေးကို Tick မလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာကြောင့်ပါပဲ.
(၃) </head> ဆိုတဲ့ Tag လေးမဆုံးခင်မှာ ဒီ Coding လေးတွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ
(၄) ဒီ စာကြောင်းလေးတွေကို လိုက်ရှာပါ
တွေ့ရင် ဒုတိယလိုင်းကို ဒီလိုလေး အစားသွင်းပေးလိုက်ပါ.
(၅) ခုနက စာကြောင်းလေးတွေရဲ့ အောက်ဖက်နားလေးမှာပဲ <dl id='comments-block'> ဆိုတာလေး ရှိပါတယ်. အဲဒါလေးကို တွေ့အောင်ရှာပြီးရင် အဲဒီ့စာကြောင်းလေး မတိုင်ခင်မှာ ဒါလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ.
(၆) ဒီထိရပါသေးတယ်နော်. ပြီးခါနီးပါပြီ. ဒီတစ်ခါတော့ ဒီစာကြောင်းလေးတွေကို ရှာပါခင်ဗျာ.
တွေ့ရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ. ဒီလိုမျိုး Coding လေးတွေ ရေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
အဲဒါကို တွေ့အောင်ရှာပြီးရင် ဒီလိုပြန်အစားသွင်းပေးလိုက်ပါ.
ဒီ စာကြောင်းလေးကို ရှာပါခင်ဗျာ.
ပြီးရင် သူ့အောက်နားလေးကို ဆက်ဖတ်ပါ. ဒါလေးတွေကိုတွေ့တဲ့ အထိပေါ့
အဲဒီ့တစ်ပိုဒ်လုံးကို ဒီလို ပြန်အစားသွင်းပေးရပါမယ်.
<a class="comments" rel="comments" expr:href='data:post.url + "#comments"' expr:onclick='"peekaboo_comments_display(&quot;" + data:f.url + "&quot;,&quot;commentsul" + data:post.id + "&quot;,&quot;&quot;,&quot;" + data:post.url + "#comments&quot;,&quot;max comments&quot;);toggleitem(&quot;comments" + data:post.id + "&quot;);return false;"'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
Max comments ဆိုပြီး အနီရောင်လေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်သလို Edit လုပ်လို့ရပါတယ်. ဥပမာ. ကော်မန့်တွေကို အများဆုံး (၅) ခုပဲ ပေါ်စေချင်ရင်5လုိ့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါ. အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ရှိသမျှ၊ ရေးပေးထားသမျှ ကော်မန့်တွေ ပေါ်စေချင်ရင်တော့ max comments နေရာမှာ false လို့ ရိုက်ပေးပါခင်ဗျာ.
(၈) Template ကို Save လုပ်လို့ရပါပြီ.
ဒီနေရာက ပို့စ်လေးကို သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားပါတယ်…